Bama Military leaders are scared of the sound of their own flatus! Tatmadaw urges Buddhist civilians to arm themselves against Muslim insurgents မွတ်စလင် လက်နက်ကိုင်ရန်များမှ ကာကွယ်ရန် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြည်သူများ လက်နက်ကိုင်ရမည်ဟု တပ်မတော် တိုက်တွန်း | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeBama Military leaders are scared of the sound of their own flatus! Tatmadaw urges Buddhist civilians to arm themselves against Muslim insurgents မွတ်စလင် လက်နက်ကိုင်ရန်များမှ ကာကွယ်ရန် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြည်သူများ လက်နက်ကိုင်ရမည်ဟု တပ်မတော် တိုက်တွန်း
Bama Military leaders are scared of the sound of their own flatus! Tatmadaw urges Buddhist civilians to arm themselves against Muslim insurgents မွတ်စလင် လက်နက်ကိုင်ရန်များမှ ကာကွယ်ရန် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြည်သူများ လက်နက်ကိုင်ရမည်ဟု တပ်မတော် တိုက်တွန်း
January 5, 2017 January 5, 2017 drkokogyi
Bama Military leaders are scared of the sound of their own flatus!
By Coconuts Yangon January 5,2017
မွတ်စလင် လက်နက်ကိုင်ရန်များမှ ကာကွယ်ရန် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြည်သူများ လက်နက်ကိုင်ရမည်ဟု တပ်မတော် တိုက်တွန်း
သတင်း – yangon. coconuts.comမြန်မာစစ်တပ်အရာရှိများက ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့နယ်တွင် တနင်္လာနေ့က ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ခေါင်းဆောင်များကို တွေ့ဆုံ၍ တိုက်တွန်းပြောကြားရာ၌ မွတ် စလင် အကြမ်းဖက် သမားများ၏ တိုင်းပြည်အား ခြိမ်းခြောက်မှု့ ရန်မှ ကာကွယ်ရန် လက်နက်ကိုင်ကြဖို့ တိုက်တွန်း အားပေးခဲ့ကြသည်။
ဒေသဆိုင်ရာ သတင်းရင်းမြစ်များက မြန်မာ့ရေးရာ စောင့်ကြည့်လေ့လာ သူများကို ပြောကြားခဲ့ရာတွင် ရခိုင်ခေါင်းဆောင်များကလည်း တိုင်းပြည် အတွက် အဆုံးစွန်ထိ အသက်ပေးကာကွယ်ရန် အသက်ရှိနေကြောင်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အဖြစ်မခံနိုင်ကြောင်း တုန့်ပြန် ပြော ကြားခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲမျာ ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ၀ိတော်ဘုရားစေတီဝင်း အတွင်း တွေ့ဆုံခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့နယ်သည်စစ်တွေမြို့နှင့်
အနီးဆုံးမှာ တည်ရှိနေသော မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး တစ်ခုတည်းသော ရိုဟင်ဂျာ ရွာတစ်ရွာဖြစ်သော ကာဒီရွာကို ပတ်ပတ်လည် ၀ိုင်းရံထားသော ဗုဒ္ဓဘာသာ အများစုနေထိုင်ရာ မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်သည် ။
← The wisdom of Maulana Jalaluddin Rumi is the most required antidote for contemporary world than ever
HRW: Myanmar’s government is trying to cover up abuses against Rohingya →